'फर्गेट मी …तिम्रो मुटु छैन'
‘फर्गेट मी …तिम्रो मुटु छैन’
यसो छातीको देब्रे पाटो छामेर हेर्‍यो उसले। निक्कै बेर त्यहाँ हात राखिरह्यो। ढक्...ढक्... आवाज सुनियो। अनि मात्र विश्वास लाग्यो उसलाई। हैन... मेरो मुटु नै त नभएको कहाँ हो रैछ र ?
तिम्रो मुटु धड्किन्छ कि धड्किँदैन ? जुन मुटुले फेर्ने सासले मेरो आस जगाएको थियो। आज त्यो मुटुको चाल कस्तो छ ? कता, कुन गतिमा दौडदैछ, तिम्रो रगत ? कुन प्रगतिमा रमाएको छ, तिम्रो वर्तमान ? सायद मेरै भूल हो कि तिम्रो कसम, जसका लागि मैले जगाएको आशा मरेछ। यति छिट्टै यसरी आशाको दियो निभ्ला भन्ने मैले कल्पनासम्म गरेकी थिइन। किन …यस्तो सोच्यौ ? कसरी यस्तो गर्यौ ?
‘फर्गेट मी …
‘तिम्रो मुटु छैन’…
अचानक यस्तो भावुक शब्दावलीको सामना गर्नुपर्दा रुन मन लाग्नु स्वाभाविकै हो। तर, उसलाई थाहा थियो। रोएर मात्र समस्याको समाधान हुनेवाला छैन। रुने त कमजोरले हो। बलियो र बाँगोले त सामना गर्ने हो। सामना गर्ने हो, समस्याको र समाधान गर्ने हो, कठिनाइको। समस्या र कठिनाइबाट भाग्ने त कायर हुन्छ, काँतर मात्र पुच्छर फर्काएर भाग्छन्।
फेरि पनि मुटु नभएको आरोप खेप्नु पर्दाको पीडा त छँदैछ। ऊ पीडाबोध गरिरहेको छ, मुटु नहुनुको। आफ्नै धड्कनमाथि, आफ्नै प्रिय मुटुमाथि नभएको आरोप खेपिरहँदा पनि विश्वास छैन।
सीमाको त्यो मन पगाल्ने त्यो शब्द के हो त ? उसको त्यो मुटु नै छुने शब्द कस्तो हो ? के साँच्चै मेरो मुटु छैन ? ऊ सोच्न बाध्य छ।
मुटु हुँदा र नहुँदाको अन्तर केलाउन थाल्दा उसले खासै अन्तर त पाएन। तर, शब्दरूपी बाँडको सामना गर्न भने नसक्दा उसलाई लाग्दैछ, साँच्चै उसले भनेजस्तो मेरो मुटु छैन कि क्या हो …? यसो छातीको देब्रे पाटो छामेर हेर्‍यो उसले। निक्कै बेर त्यहाँ हात राखिरह्यो। ढक्…ढक्… आवाज सुनियो। अनि मात्र विश्वास लाग्यो उसलाई। हैन… मेरो मुटु नै त नभएको कहाँ हो रैछ र ?
मनको शान्ति न हो। विश्वास न हो। मन र मस्तिष्क बीचको अन्तरले मान्छेलाई अलमल्याउँदो रैछ। मनले सोच्छ, त्यसपछि बल्ल मस्तिष्कले अह्राउँछ। अनि शरीरले काम गर्छ। शरीरका अंग प्रत्यंगहरु, जो आफैँ काम गर्न सक्दैनन्। उनीहरूलाई अह्राउनु पर्छ। मेरो मुटुले पनि आफैँ काम गर्न नसकेर पो हो कि उसले त्यसो भनेकी …
सायद उसको मनको तरंगले छुन नसकेर हो या तनको रंगले धुन नकसेर हो। आज जसरी अर्जुनको जस्तो तिखो शब्दको बाँडले त्यही मुटुमा लाग्यो। त्यसपछि उसको मुटु अलिक छिटो छिटो धड्किँदै छ। त्यति बेला मात्र उसले महसुस गर्‍यो। साँच्चै मुटुमा कुनै गम्भीर चोट लागेको छ या मनमा खोट। मुटुमा लागेको चोटले असह्य पीडा हुँदो रैछ। बरु तनमा लागेको चोट चोट नै हैन। तनमा लागेको चोट त एउटा सामान्य एमबीबीएस डाक्टरले नै चट पार्न सक्छ। मनमा लागेको खोट बरु पखाल्न सकिएला। तर, मुटुमा लागेको चोट त न सर्जनले निको पार्न सक्छ न वैद्यले। किनकि मुटु त यति संवेदनशील हुँदो रैछ। यति कोमल हुँदो रैछ।
हुनतः मुटु नभए कोपो बाँच्ला र ? मुटु नै नभएकासँग संवेदना हुँदैन। मसँग त संवेदना छ। वेदना छ।
मुटु नभएको आरोप लागेको रात म निदाउन सकिन। सुत्न सकिनँ, थाहा छ ? तिमी त निदायौ नै होला। किनभने मनको शान्ति नै सही कमसेकम तिमीले एउटा शब्द बाँड त म तिर फ्याँक्यौ। तिम्रो मनले कल्पेको त्यो शब्दले मेरो मुटुमै ठ्याक्कै लाग्यो। ठिक ठाउँमा प्रहार गर्‍यौ, तिमीले। हो… दुस्मनलाई यसरी नै हो हान्ने। मर्नेगरि…
त्यही शब्द बाँडले लागेर म सुनको मृग झैँ ढलेको छु। एउटा भोको शिकारी झैँ तिमी मेरो वरिपरि घुमिरहेको जस्तो अल्प सपना देख्दैछु। आँखामा मन्द विषजस्तै निन्द्रा घोलिएको बेला झिर झिर यस्तै दृश्य देख्दैछु। हातमा अरू धेरै बाँड बोकेर पनि मेरो मुटुमा लागेर रगतै रगतले लतपतिएको एउटा बाँड झिक्ने कोसिस गरिरहेको एउटा क्रूर शिकारीको पञ्जामा म परेको दृश्य मेरा आँखामा नाचिरहेका छन्। एउटा ब्यादाले जसरी मृग मारेर खाने योजना बनाउँछ, त्यसरी नै मेरो मुटुमा लागेको त्यो बाँडले तिम्रो पनि योजना पक्कै पूरा नै भयो होला। किनभने म त्यो शिकारी हैन, जसले तिम्रो कोमलतालाई आत्मसात् गर्न सकेन। तिम्रो तनलाई अँगाल्न सकेन। म त्यो शिकारी हैन, जसले तिम्रो शरीरमाथि अधिकार जमाउन चाहेन। तिम्रो रहर पूरा गर्न सकेन। म त्यो ब्याभिचारी हैन, कुनै कुचक्र गर्न मनले मानेन। तिमीलाई दुश्चक्रमा फँसाउँन चाहेन, म त्यो शिकारी पक्कै होइन।
के मेरो दोष यही हो ?
हो… आज मेरो मुटु छैन, तिमीले भनेजस्तो। तिम्रो प्रहारले मेरो मुटु छियाछिया परेको छ। खिया परेको छ, मेरो मुटु। बरु यति बेला तिम्रो मुटुले शान्ति महसुस गरिरहेको होला। मनले पनि त्यस्तै सोच्दै होला। तनमा आरामै होला। तर, यो कुरा बुझिराख मुटु हुनु र नहुनुका बिचमा धेरै असमानता हुन्छ। जति बेला रगतले आफ्नो चाललाई सही ढङ्गले चाल्छ, त्यति बेलासम्म त ठिकै हो…मजा आउँछ। जब रगतले आफ्नो चाल बदल्छ, जब ब्ल्डप्रेसरले सताउँछ, त्यति बेला शरीरले आराम पाउँदैन। त्यति बेला न मन शान्त हुन्छ, न तन शान्त।
हो…त्यति बेला तिम्रो पनि मुटु दुःख्न सक्छ। हो… त्यति बेला तिम्रो मुटु पनि सुक्न सक्छ। हो…त्यति नै बेर तिम्रो पनि मुटु नहुन सक्छ। के त्यतिखेर म तिमीलाई त्यसो भन्न सक्छु होला र ? जसरी तिमीले एकै झोँकमा भन्यौ।
व्यभिचारी लोग्ने र परिवेष्ठित मनमाया (कथा)
एन पी घायलको ‘गजल’